Andriamanitra dia tia an'i Burundi ka ny sisa any Afrika dia afaka mahazo ny virus?
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Andriamanitra dia tia an'i Burundi ka ny sisa any Afrika dia afaka mahazo ny virus?
Burundi, amin'ny fomba ofisialy ny Repoblikan'i Burundi, dia firenena voahidy tanety ao amin'ny Great Rift Valley izay mivangongo ny faritanin'i Great Lakes Africa sy Afrika Atsinanana. Burundi dia firenena kely any atsinanan'i Afrika, misy fifandraisana ara-kolontsaina sy ara-jeografika mampifandray azy amin'i Afrika Afovoany.
Manodidina azy i Rwanda, Tanzania ary ny Repoblika Demokratikan'i Kongo.
Ireo firenena tandrefana dia tsy mihevitra an'i Burundi ho azo antoka ho fizahan-tany. Betsaka ny governemanta no manoro hevitra ny olom-pireneny mba tsy handeha any Burundi satria heverina fa tena atahorana mafy izany. Ny heloka kely sy ny herisetra mahery vaika dia mahazatra eto. Ny ankamaroan'ny olona ao Burundi kosa dia heverina ho sariaka be.
Burundi dia voatahy miaraka amin'ny bibidia sy zava-maitso. Ny ambanivohitra dia mirehareha amin'ny karazan-javamaniry sy biby izay misy voay, antilopa, antelopa, ary hipopotamazy. Burundi dia iray amin'ireo firenena kely indrindra eto Afrika. Ny fizahantany dia mbola tsy indostria lehibe ho an'i Burundi, ary ny ankamaroan'ny olom-pirenena dia mila mahazo sarotra ny fahazoana visa mialoha handehanana any Burundi.
Ny Farihin'i Tanganyika any Burundi dia farihy lehibe afrikanina. Miaraka amin'i Kenya, Rwanda, Tanzania ary Oganda, i Burundi dia ao amin'ny fanjakana mpiara-miasa Afrikana Atsinanana.
Tsy misy afa-tsy trangana Coronavirus miisa 3 voalaza fa any Burundi amin'izao fotoana izao, ary tsy misy tatitra momba ny olona maty ao amin'ity firenena Afrikanina Atsinanana ity amin'ny COVID-19. Nilaza ny governemanta fa olona 675 no tao anaty karantina manerana an'i Burundi hatramin'ny Alarobia. Kely ihany koa ny tranga any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy, saingy mety io no fitoniana alohan'ny tafio-drivotra mahatsiravina.
Tsy maintsy mianatra avy any Italia, Espana, Sina na Etazonia i Afrika, izay niandohan'ny tranga iray na roa. Ny antokon'ny fitondrana any Burundi dia miteny amin'ny olom-pireneny mba tsy hanahy ny amin'ny virus sy ny amin'ny fiainany mahazatra.
Tian'Andriamanitra i Burundi no hafatry ny jeneraly Evariste Ndayishimiye, ny kandidà ho filoham-pirenena ho an'ny antoko CNDD-FDD eo amin'ny fitondrana.
Na dia nitondra aina aza ny fanidiana mafy dia mafy tany amin'ireo tanàna nanerana an'i Afrika sy izao tontolo izao, ny fisakafoanana sy ny fisotroana kosa dia mbola misokatra ao Burundi, miaraka amin'ny fanapahana fanapahana toy izany koa amin'ny fahalalahan'ny olom-pirenena.
Mandeha ny fampakaram-bady sy ny fandevenana, mpino marobe an'arivony no mirohondrohona mankamin'ny fiangonana sy moskea, ary ny tsena feno olona dia mijanona misokatra sy mivarotra ao amin'ny tany 11lock.
Miatrika mialoha ihany koa ny fiainana politika, miaraka amin'i Ndayishimiye sy ny mpifaninana aminy voalohany ho filoham-pirenena, Agathon Rwasa avy amin'ny antoko CNL, eo amin'ny làlana fampielezan-kevitra ary manao fifaninanana amin'ny famoriam-bahoaka.
Burundi dia mijanona ho iray amin'ireo firenena vitsy eto an-tany mitazona ny ligin'ny baolina kitra fizarana voalohany sy faharoa - amin'ny mpijery fotsiny no mila manasa tànana ary iharan'ny fizahana mari-pana.
Tsy ny rehetra no mitovy finoana sy fanantenana amin'ny governemanta, ary matahotra ny olona sasany.
Ny banky sasany dia mampihatra ny fepetra fanalavirana ny fiaraha-monina ary nampidirina eo am-baravaran'ny fivarotana sy trano fisakafoanana maro ireo toby fanasana tanana. Nandray fepetra ihany koa ny governemanta, nandefa hafatra momba ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny fahitalavitra sy radio, raha ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tao Bujumbura kosa nikatona telo herinandro lasa izay.
Ny sisin-taniny dia nakatona hatrany Rwanda sy ny Repoblika Demokratikan'i Kongo. Ny sisintaniny miaraka amin'i Tanzania ihany no mivelatra, làlan-tokom-pivelomana ara-toekarena mamela ny fiara mavesatra sy ny fanafarana entana handalo.
Ny diplaomaty, ny tompon'andraikitra ao amin'ny ONU ary ny vondrona fiarahamonim-pirenena dia naneho ahiahy matotra momba ny fahafahan'i Burundi miatrika areti-mandringana.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina nanentana ny mpitondra tany Burundi: “Tian'Andriamanitra i Burundi. Tian'Andriamanitra hanatevin-daharana an'i Afrika manontolo i Burundi, ary handray fitandremana avy hatrany ny ambiny. I Burundi dia tsy maintsy manaja ny loza aterak'ity virus ity tsy ho an'i Burundi ihany, ho an'ny mpiara-monina aminy, fa ho an'i Afrika manontolo ihany koa. ”, Hoy hatrany i Ncube,“ tontolo mifamatotra ity ary tsy manaja ny sisintanin'i Burundi na firenena ity fahavalo mahafaty ity. . Ho fitsinjovana ny olona rehetra atsy Afrika, dia miangavy an'i Burundi izahay mba tsy hametraka anay rehetra amin'ny loza mety hitranga mahafaty. Tsy hanana ny recourses i Afrika hiadiana amin'ny valan'aretina toy izao raha vao mipoaka izy. Tsy maintsy ialana amin'ny vidiny rehetra izany. Avelao i Afrika ho ohatra mamirapiratra ho an'ny zanak'olombelona. Andriamanitra koa dia tia an'i Afrika. ”
Vonona ny hiverina amin'ny fivoriana sy fivoriambe mivantana ny Amerikanina